नेपाल भ्रमणमा आएकी एमसिसी उपाध्यक्ष फतिमा कति शक्तिशाली, को हुन् ?
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचारहरु » नेपाल भ्रमणमा आएकी एमसिसी उपाध्यक्ष फतिमा कति शक्तिशाली, को हुन् ?
न्यूयोर्क । फतिमा जेड सुमार अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) ( Millennium Challenge Corporation MCC ) उपाध्यक्ष एवं कम्प्याक्ट सञ्चालन विभाग उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । ( Fatema Z. Sumar Vice President, Department of Compact Operations )
उहाँसँग अन्तर्राष्ट्रिय विकास, परराष्ट्र नीति, कूटनीति र वकालतमा उत्कृष्ट विशेषज्ञता छ । उहाँ कमजोर आर्थिक अवस्थाको जनसंख्या भएको देशका लागि वैश्विक प्रणाली रूपान्तरण र गरीबीबिरुद्धको क्षेत्रमा अनुभवी व्यक्तित्व हो ।
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मा उहाँ कम्प्याक्ट अपरेसन उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । उहाँ अविवाहित हुनुहुन्छ ।
सुश्री फतिमा आर्थिक बृद्धि, गरीबी घटाउनका लागि एमसिसीले दिएका सबै अनुदान दिइएका कम्प्याक्टहरुको निरीक्षण तथा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारी हो ।
एक राष्ट्रपति प्रबन्धन फेलो (पिएमएफ) को रूपमा कांग्रेसमा समेत उहाँ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, र फराकिलो क्षेत्रमा केन्द्रित अमेरिकी सीनेटको विदेश सम्बन्ध समितिमा वरिष्ठ व्यावसायिक अधिकारीको रुपमा कार्य गर्नुभएको अनुभवी राष्ट्र सेवकको छवि बनाउनुभएको व्यक्तित्व हो ।